I-Walnut | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Kuwusizo kanjani i-hazel empilweni yabantu?
I-Hazelnut noma i-hazel seyaziwa kakade ngamashumi amaningana ezinkulungwane kubantu baseYurophu, e-Asia naseNyakatho Melika, lapho izakhiwo zayo eziwusizo zihlonishwa ngayo. Ngaphezu kokunambitheka okumnandi kanye nezimfanelo ezibalulekile zokudla okunomsoco we-hazel nati (kanye namaqabunga awo, amagxolo kanye nezimpande) anezimfanelo zokuphulukisa. Akumangalisi ukuthi okhokho bethu bakholelwa ukuthi lesi sitshalo sinikeza ukungafi futhi sinikeze ngamakhono angaphezu kwamandla.
Izinhlobo zeHaznnut (Hazelnut): izithombe nencazelo yezitshalo
Ama-hazelnuts abizwa ngokuthi ama-nati ezinhlobo ezingu-20 ze-Hazel, eziseBirch yomndeni, ngokuvamile i-hazelnut ejwayelekile, i-hazelnut enkulu ne-Ponzel hazelnut - amafomu amakhulu. Indawo yokusabalalisa i-Eurasia neNyakatho Melika, ensimini yehlathi le-coniferous eliqhamukayo liyakha i-undergrowth. Ukusetshenziswa kwama-hazelnuts embonini ekukhiqizeni i-confectionery namaswidi kuvamile kakhulu.
I-Nutmeg - ukusetshenziswa okuzuzisayo nokulimazayo kwesithelo se-nutmeg
I-Nutmeg ibizwa ngokuthi i-spice ethandwayo enephunga elimnandi, i-acrid flavour futhi lisetshenziselwa ukupheka. Kodwa-ke, lezi zikude nazo zonke izakhiwo ezenza umculi odumile - uthole uhlelo lokusebenza kwezokwelapha (zendabuko kanye nabantu), i-cosmetology ne-perfume. Kulesi sihloko, sikunikeza ngokubheka okunamandla kokusebenza kwayo kanye nokuzikhethela kokusetshenziswa kwayo.
Ukulima nokulimala ama-walnuts
Kusukela esikhathini esidala kuze kube namuhla, i-walnut ibizwa ngokuthi "umuthi wokuphila". Ngenxa yokwakheka okuyingqayizivele okunamavithamini, izakhi ezincane nezincane nezinye izinto eziwusizo, amantongomane asetshenziselwa ukwelashwa kwezifo eziningi, abuyisele amandla okulahlekelwa, anelise indlala. Ukugcwalisa umzimba ngezakhi eziwusizo kunele amantongomane ambalwa ngosuku.
Amafutha omsedari: lokho kusiza, yikuphi ukuphatha, ukusebenzisa nokuthatha
Amantongomane e-Pine adumile hhayi nje ngomunambitheko omnandi, kodwa futhi nangomuthi omkhulu wezakhi zomzimba, kunengqondo ukucabanga ukuthi amafutha avela kulezi zinambithe ayophinde abe nokubunjwa okucebile. Okulandelayo, sithola ukuthi yiziphi izindawo zamafutha omsedari angasetshenziswa, futhi ekulweni nezifo ezingasiza.